Gudoomiyihii Baarlamaanka oo hada xilka laga qaaday & Xildhibaano sheegay in ay…. – Puntlandtimes
Gudoomiyihii Baarlamaanka oo hada xilka laga qaaday & Xildhibaano sheegay in ay….
September 13, 2018 Puntland PL
DHUUMAREEB(P-TIMES)- Magalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay xildhibaano ka tirsan maamulkaas, kuwaas oo ka dooday mooshin ay sheegeen inay ka keeneen guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaanada ayaa dood dheer kadib waxa ay cod u qaadeen mooshinka laga keenay guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir, waxaana natiijda ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed.
Waxa uu sheegay in kulankii maanta ay soo xaadireen 147 xildhibaan 146 ka mid ah ay ogolaadeen in codka kalsoonida lagala noqdo Cali Gacal Casir gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug halka hal mudane uu diiday sidaasina uu xilkii ku wayaayey guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale waxa uu sheegay in la samayn doono guddi ka shaqayn doona doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Dhinaca kale xildhibaano ka tirsan Galmuudg oo ku sugan magaalada Cadaado oo warbaahintu xidhiidh la samaysay ayaa waxa ay sheegeen in aysan waxba kala socon kulanka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb isal markaasna natiijada kasoo baxday aanay waxba ka jirin.